स्वास्थ्य सावधानीका साथ रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको तयारी – Highlights Tourism
17 hours ago पञ्चासेलाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सरोकारवालाहरु एकमत
19 hours ago अयोध्यापुरी राम जन्मभूमि प्रमाणित होला?
22 hours ago रानीपोखरी भर्न आकाशे पानीको प्रयोग
2 days ago लेक घुम्टे पुग्न नयाँ पदमार्ग
3 days ago मनाइयो गाइजात्रा
3 days ago दैनिक ४८ आन्तरिक उडानलाई अनुमति
3 days ago आकाशसँगै खुलेका हिमाल
3 days ago विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा बस्ने वातावरण मिलाउन आग्रह
3 days ago धामीलाई देउता चढेपछि…….
5 days ago पाँचथरको मृदुङ्गा झरनाको आकर्षण
5 days ago घलेगाउँका घरबास भदौ १ देखि खुल्ने
6 days ago तारे होटलको तयारी तीव्र
7 days ago श्रीअन्तुका होमस्टे भदौ १ बाट खुल्ने
7 days ago घुमन्तेहरुलाई भूगर्भविद्को टिप्स
7 days ago बर्खामा कायाकिङ्ग
1 week ago पद्यसंभव पदमार्ग पर्यटन विकासका लागि कोसेढुङ्गा : पर्यटनमन्त्री भट्टराई
1 week ago ‘राहतको लागि ‘क्यास फर वर्क’को प्रस्ताव गरेका छौँ’
1 week ago घुम्दै विदेशी पर्यटक
1 week ago अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक
1 week ago ऐतिहासिक इनारको पुनः निर्माण
1 week ago होटल सञ्चालनको तयारीमा पोखराका पर्यटन व्यवसायी
–सञ्चिता घिमिरे/सुभानु आचार्य
ललितपुरको पुल्चोकमा वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ तयार गर्दै । करिब १५ दिनमा रथ निर्माण गर्ने गरी असार १० गतेबाट सुरु गरिएको हो । मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सबै भन्दा लामो जात्राको रुपमा पनि लिइन्छ । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ/रासस ।
काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम कम गर्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानीका साथ उपत्यकामा वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा मनाउने तयारी गरिएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण सञ्चालन हुन नसकेको जात्रा सञ्चालनका लागि रथ निर्माणको काम शुरु भएसँगै पाटन क्षेत्रमा रौनक शुरु भएको छ । पहिलेका वर्षजस्तै सहज नभए पनि रोकिएको जात्रा शुरु हुन लाग्दा यहाँका स्थानीयवासी खुशी देखिएका छन् । गुठी संस्थान ललितपुर शाखाले पनि आवश्यक सावधानीसहित जात्राको तयारी गर्न थालेको छ ।
गुठी संस्थान ललितपुर शाखाले बन्दाबन्दी पहिले नै रथ निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गरिसकेको थियो । त्यही सामग्रीबाट अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी यही असार १० बाट रथ निर्माणको काम थालिएको शाखाका प्रमुख राजन भुजुले बताए । उनले भने, “ललितपुर महानगरपालिका, ज्यापु समाज, रथ निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, धार्मिक सङ्घसंस्था र मच्छिन्द्रनाथका पुजारीले पटकपटक आग्रह गरेपछि यस कामलाई अघि बढाएका हौं ।”
रथ निर्माणमा संलग्न हुने व्यक्ति र समुदायको स्वास्थ्यमा ध्यान राखिएको उनले बताए । अहिले मिननाथको रथ निर्माणका लागि धमा बनाउने काम भइरहेको छ । उनले भने, “एकादशीको दिनबाट मीननाथको रथ निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ ।”
वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा रथारोहण गर्नुपर्ने भए पनि सो दिन गर्न नसकिएकाले राम्रो दिन हेरेर रथारोहण गर्न लागिएको ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशीले बताए । गत १० गते रथ बनाउन लागिएकामा दुई सातामा सकिएपछि यही असार २४ गते रथारोहण गर्ने तयारी गरिएको छ । साइत गइसकेकाले पनि विधिपूर्वक अर्को साइत हेर्नेभन्दा पनि राम्रो दिनमा गर्न लागिएको हो । जात्राका अवधिमा विधिपूर्वक मङ्गलबजारस्थित सोह्रखुट्टे पाटीमा बसेर साइत हेरिन्छ । यो पटक त्यसरी हेर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । जात्राका विधि पुर्‍याएर तथा भीड कम गरेर सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “यो समयमा भीड गर्न नहुने भएकाले रथ तान्न वा अरु विधिमा चाहिने मात्रै भएर गर्न सकिन्छ ।”
बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जात्रा चलाउने योजना अघि बढाएको महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । जात्राको तयारीमा लाग्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिएको उनले बताए । उनले भने, “हामीले उहाँहरुलाई आवश्यक मास्क र स्यानिटाइजर प्रदान गरिरहेका छौं, कोभिड– १९ बाट बच्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनिरहेका छौँ ।”
जीवनको सातदशक नाघेका कपिल बज्राचार्य मूल पुजारीका रुपमा रहेका छन् । जात्रा सञ्चालनको तयारी नभएको भन्ने जानकारीले गर्दा उनको मन दुखेको थियो । उनले २२/२३ वर्षको उमेरदेखि नै मच्छिन्द्रनाथको पुजारीका रूपमा देवताको सेवा गर्दै आएका छन् । विगतमा पनि धेरै वर्षमा अप्ठ्यारो अवस्था आउँदासमेत कहिल्यै जात्रा नरोकिएको उनको अनुभव छ । अहिले महामारीका समयमा सहकालको देवताको जात्राको अझै बढी महत्व भएको उनको भनाइ छ । विसं २०७२ मा भूकम्पका कारण घर भत्किएको र चर्किएकाले रथ यात्रा के गर्ने भनी अन्योल भए पनि त्यतिबेला पनि जात्रा सञ्चालन भएको थियो । अहिले पनि आवश्यक सावधानी अपनाएर भीडभाड नगरी जात्रा गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने, “देवताको प्रभावले अहिले सङ्कट पनि हट्नेछ, देवताको जात्रा रोक्नु राम्रो हुँदैन ।”
विगत २० वर्षअघिदेखि मच्छिन्द्रनाथ रथ निर्माणमा लागि परेका हाल ८३ वर्षीय आशालाल महर्जनले यस वर्ष कोरोनाका कारण समयमै जात्रा मनाउन नपाउँदा नरमाइलो लागेको बताए । ढिलै भए पनि जात्राको तयारी शुरु भएकाले उनी दङ्ग छन् । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै रथ निर्माण थालिएकामा उनले आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आएका छन् । उनले भने, “अहिले रथ निर्माणमा लागि परेका युवालाई परेको काम सिकाउने गरेको छु ।”
चारदशक पहिलेदेखि सो काममा लागि परेका ८१ वर्षीय सिद्धिबहादुर महर्जनले रथ निर्माणको काम अघि बढेसँगै संस्कार र संस्कृति अघि बढ्ने भएकाले आफूलाई खुशी लागेको बताए । उनले भने, “हामीले रथ निर्माणमा लागेका युवालाई राम्रोसँग काम गर्न प्रेरणा दिइरहेका छौं ।”
दुईदशक पहिलेदेखि यससँग सम्बन्धित काम गर्दै आएका ५६ वर्षीय रामेश्वर महर्जन ढिलै भए पनि जात्राको तयारी भएकामा खुशी छन् । उनका हजुरबुवाले रथ निर्माण गरेकाले त्यतिबेलाबाटै काम सिकेका हुन् । रथ बनाउन १२ जना ञँवाल, ३० जना सहायक ञँवाल र २४ जना गुठियार सहभागी हुने ७० वर्षीय ञँवाल सूर्यमान डङ्गोलले बताए । रथ निर्माण झण्डै १५ दिनमा सकिने अनुमान गरिन्छ । उनले भने, “अहिले दिनहुँ बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म काम भइरहेको छ ।”
सोहीअनुरुप आसाम कामारुकामाक्षेमा रहेका मच्छिन्द्रनाथलाई बोकेर कान्तिपुरमा ल्याउने क्रममा मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनमा नै राख्न पाए सहकाल लाग्ने र पाटनवासीमा खुशियाली छाउने विश्वासमा निकै चलाखी गर्दै कृषक ललितले मच्छिन्द्रनाथलाई बोकेर ल्याउने क्रममा पाटनमा रात पारिदिए । राति भइसक्यो अब आज पाटनमा बसौँ भनेर गुरु र भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेवलाई मनाए । सबै सुतिसकेपछि उनी पाटनका राजाकहाँ गई सम्पूर्ण कथा बताएर मच्छिन्द्रनाथलाई यतै राख्ने प्रपञ्च गरे । सोहीअनुरुप राति नै पाटनका राजासहितले भक्तपुरका राजा र गुरुलाई घेराउ गरे । आफूहरू बन्धक बनेको चाल पाएपछि भक्तपुरका राजा र पाटनका राजाबीच निकै विवाद पर्‍यो ।
पहिले पहिले जात्रामा उपत्यकाका तीनै जिल्लावासीको संलग्नता हुने गरेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । पुल्चोकबाट शुरु हुने रथयात्रामा गाःबहालसम्म रथ तान्नुपर्ने जिम्मेवारी भक्तपुरवासीको हो भने गाःबहालबाट सुन्धारासम्म काठमाडौँवासीको । निकै पहिलेदेखि नै भक्तपुरवासी र काठमाडौँवासीले रथ तान्न आउन छाडिसकेका छन् । सुन्धाराबाट लगनखेलसम्म पाटनवासीले तान्ने गरेका थिए । एकदशकयता रथ तान्ने काम ज्यापु समाज यलले गर्दै आएको छ । रथयात्रा पुल्चोकबाट शुरु भई गाःबहाल, मङ्गलबजार, थट्टीटोल, लगनखेल हुँदै जावलाखेल पुर्‍याइन्छ । जावलाखेल पुर्‍याएको चौथो दिन साइतअनुसार भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख समक्ष भोटो देखाउने कार्य सम्पन्न भएपछि जात्रा पनि सकिएको मानिन्छ । –रासस
Previous article न्यातपोल पुनर्निर्माणमा श्रमदान
Next article दर्मिजा तातोपानी कुण्ड
रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ तयार गरिंदै
पञ्चासेलाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सरोकारवालाहरु एकमत
अयोध्यापुरी राम जन्मभूमि प्रमाणित होला?
रानीपोखरी भर्न आकाशे पानीको प्रयोग
लेक घुम्टे पुग्न नयाँ पदमार्ग
काठमाडौं । पञ्चासे क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आर्कषणको केन्द्रको रुपमा …
काठमाडौं । पञ्चासे क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आर्कषणको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सरोकारवालाहरु …